Isku soo bax lagu taageerayay guulaha Ciidamada dowladda oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Isu soo bax lagu taageerayay guulaha ciidamada dowladda oo ay ka soo qeyb galeen Mas'uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir, Ururada Bulshada rayidka iyo dadweyne ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Dadkii ka soo qeyb galay ayaa xirnaa dhar ka sameysnaa Calanka Jamhuuriyada Soomaaliya, dharka hidaha iyo dhaqanka, waxaana ay ku hadaaqayeen erayo ay ku taageerayeen Ciidamada dowladda.
Isu soo baxan ayaa waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay Hey'adda Wada hadalka Bulshada ee CCD, Midowga Dhalinyarada Soomaaliyed ee UYS, iyo Maamulka degmada Warta Nabada ex Wardhiigley.
Gudoomiyaha degmada Warta Nabada Deeqo C/qaadir Axmed oo la hadashay dadkii isugu soo baxay Xarunta degmada ayaa soo dhoweysay guulaha ay gaareen Ciidamada dowladda iyo goobihii ay ka qabsadeen Al-Shabaab.
"Howl galada Muqdisho laga bilaabay ilaa Marka la sii marayaa, waa soo dhoweyneynaa guulaha ay ciidamada qalabka sida ay soo hoyeen, waa inaan taageernaa"ayay tiri Deeqa C/qaadir Axmed oo intaa ku dartay in looga baahan yahay shacabka inay taageeraan Ciidamada dowladda iyo Ciidamada AMISOM, si ammaanka loo xaqiijiyo.
Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Maxamed Cali Axmed ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in Ciidamada dowladda ay ka xoreeyaan deegaanada ay xooga ku heysteen Shabaab, waxaana uu ugu baaqay shacabka inay taageeraan.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf ayaa dhankiisa waxaa uu sheegay inay soo dhoweynayaan in Gobolada deriska la ah Gobolka Banaadir ay meel wanaagsan mareyso dib u xoreynta, waxaana uu ugu baaqay Ciidamada qalabka sida inay sii wadaan howl galada ka dhanka ah Shabaab.
Waxaa uu sheegay in ammaanka magaalada Muqdisho uu yahay mid wanaagsan, isla markaana ay magaalada imaanayaan dadweyne dibadaha ka yimid, waxaana uu xusay in shacabka iyo Ciidamada ammaanka iska kaashadeen sugida ammaanka
Ugu dambeyn isu soo baxan ayaa dadweynihii ka qeyb galay waxay ku taageereen howl galadii u dambeeyay ee lagu qabtay magaalada Marka iyo deegaanada kale ee Jubada Hoose, waxaana loogu baaqay Ciidamada qalabka sida inay sii wadaan howl galada.